BRIDGERTON မိတ်ဖက်များ - NETFLIX စီးရီးကြယ်ပွင့်အားလုံး၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘ ၀ တွင် - သတင်း
Netflix ပေါ်ရှိ Bridgerton ၏သရုပ်သကန်အားလုံး၏အချစ်ဘဝ၌
သငျသညျ Netflix အပေါ် Bridgerton စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြလျှင်သင်ကျိန်းသေအနည်းဆုံးတစ်ချိန်ကသွန်းအဖွဲ့ဝင်တ ဦး တည်းချိန်းတွေ့စဉ်းစားတော့ဒီမှာ, ကိုယျ့ကိုယျကိုမှမုသာမသုံးပါစေနဲ့။ အစစ်အမှန်ဘဝ၌ဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်လာမယ့်အလျင်အမြန် Hastings ၏, စစ်မှန်တဲ့မင်းသမီးလေးသို့မဟုတ် Eloise ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုခံထိုက်သောသူတစ် ဦး အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကူး။ မင်းရဲ့ပူဖောင်းတွေကွဲထွက်သွားပြီးစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အိပ်မက်တွေကအနည်းငယ်ပျက်စီးတော့မယ့်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Bridgerton cast အချို့ကတကယ့်ဘဝမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အခု Bridgerton အသင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့ပြီးတကယ့်ဘဝမှာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အသက်ရှင်နေထိုင်တာကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးဖွယ်ဂုဏ်ပြုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်။ မင်းသားကဘဝမှာတကယ်ကြင်နာပြီးချစ်တာလားလို့ငါတွေးမိသလား။ ဒါက Duke ကိုလက်ထပ်ခြင်းနှင့်ဘယ်လိုတူမလဲ ဤတွင် Netflix အပေါ် Bridgerton ၏သွန်း၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝသို့နက်ရှိုင်းသောငုပ် - အရေးအကြီးဆုံးကတော့, မိတ်ဖက်တယ်သူ, ပိုးပန်းမယ့်သူနှင့်တစ်ခုတည်းသောသူသည်။
Courting status ကို: လူပျို
Instagram မှတစ်ဆင့် @phoebedynevor
Daphne Bridgerton တွင်ပါဝင်သော Phoebe Dynevor သည်သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝအကြောင်းကိုယခင်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်သူမသည်ထိုအချိန်ကထိုင်းရည်းစားထက်ဝက်ခန့်အားစုဆောင်းမှုအမှုဆောင်ဖြစ်သူ Simon Merill နှင့်အတူအရှေ့တောင်အာရှသို့ခရီးထွက်ခြင်းအကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကသူမသရုပ်ဆောင် Sean Teale နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသော်လည်းသူတို့ခွဲထွက်ခဲ့သည့်အစီရင်ခံစာများအရ Duke နဲ့ Duchess တို့ဟာတကယ့်ဘ ၀ မှာလည်းအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့၊ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ , Regé-Jean Page မှပြောကြားခဲ့သည်မှာ၎င်းတို့ကြားရှိမီးစများမှာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပြီးအလွန်ကြီးစွာသောဇာတ်ညွှန်းရေးသားခြင်းမှဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အရှက်။ အခုအချိန်မှာတော့ Phoebe ဟာတစ်ကိုယ်ရေသမားဖြစ်နေပါပြီ။
Instagram မှတစ်ဆင့် @regejean
ဟုတ်တယ်၊ ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းတွေကိုဖြေကြည့်ရအောင်။ တကယ်တော့မြို့ပေါ်ကလူတွေကအရည်အချင်းအရှိဆုံးသူကစျေးမှာလား။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်သူသည်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်ဝန်ကြီးချုပ်များအတူတကွပြသခဲ့ပြီးနောက် (Misfits and Lovesick မှ) Antonia Thomas နှင့်ချိန်းတွေ့မည်ဟုကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကကောလာဟလကိုအတည်ပြုဘူး။
Regé-Jean Page သည်သူ၏ဘ ၀ နှင့် ပတ်သက်၍ အတော်လေးပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးအခြေအနေသို့မဟုတ်အတိတ်မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလူသိများမှုမရှိသေးပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ကသူတို့ပြောတာကိုသင်သိတယ်၊ သတင်းကောင်းကသတင်းကောင်းမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်သူကတစ်ကိုယ်ရေဘဝအဖြစ်ယူမှတ်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Instagram မှတစ်ဆင့် @jabyleaf
မင်းရဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်ဒါကိုချိုးဖျက်မိလို့ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Anthony Bridgerton ကစားတဲ့ Jonathan Bailey ကတကယ့်ဘ ၀ မှာလိင်တူချစ်သူပါ။ သူကယခုအချိန်တွင်မည်သူမဆိုချိန်းတွေ့နေသည်သော်လည်းအဖြစ်သူမကြည့်, သူသည်လူသိရှင်ကြားသူဖြစ်စေဟုမထားပါဘူး။
Instagram မှတစ်ဆင့် @nicolacoughlan
အစီရင်ခံစာများအရသိရသည် Bridgerton ရှိ Penelope Featherington၊ Nicola Coughlan သည်ယခင်ကချိန်းတွေ့ခဲ့သောသရုပ်ဆောင် Laurie Kynaston, သို့သော်သူတို့၏အလုပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ Nicola Coughlan ဟာအခုအချိန်မှာတစ်ကိုယ်ရေဖြစ်နေပုံရပါတယ်။
Courting status ကို: တစ်ဆက်ဆံရေး၌
Instagram မှတစ်ဆင့် @lukenewtonuk
ကံမကောင်းစွာဖြင့်အငယ်ဆုံးဖြစ်သော Bridgerton အစ်ကို Colin အားကစားသူ Luke Newton သည်ဆက်ဆံရေးတွင်ရှိနေသည်။ သူမသည်အားလုံးသည်သူ၏ Instagram ကိုပရိုဖိုင်းကိုကျော်ရဲ့သူတို့အတူတူခရီးသွားလာသွားကြဖို့ကိုချစ်တူသောကြောင့်ကြည့်ရှုသည်။ သူ့ရည်းစားကမင်းသမီး Jade Louise Davies ပါ။ သူတို့ဟာ 2019. ကတည်းကအတူတူနေခဲ့ကြတာပါ။ Jade ဟာ Love Island ဆုရှင်ဟောင်း Amber Davies ရဲ့အစ်မပါ။ !!
Eloise Bridgerton တီးခတ်သူကလော်ဒီယာကသူမရဲ့မျက်နှာပြင်အပြင်ဘက်ဘဝအကြောင်းကိုတော်တော်လေးပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်သည် - သူမယခင်ကပြောခဲ့ဖူးသောဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များမရှိသဖြင့်သူတို့၌စိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အစီရင်ခံစာများအရသိရသည် ဘာမင်ဂမ်သရုပ်ဆောင်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ သူ့ကိုဂျိုးဇက်ဟုခေါ်သည်။ သူမသည်သူမမွေးရပ်မြေမြို့ရှိဆရာဝန်များနှင့်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အသံအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
Courting status: လက်ထပ်ခဲ့သည်
Instagram မှတစ်ဆင့် @thejohannabraddy
မင်းသားဖရက်ဒရစ်တွင်ဇနီးတစ် ဦး ရှိသောကြောင့်မင်းများမင်းသမီးလေးမဟုတ်တော့ပါ။ Freddie ရဲ့အခြားတစ်ဝက်ကို Johanna Braddy လို့ခေါ်တယ်။ သူမဟာမင်းသမီးလည်းပါပါတယ်။ သူမသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က The Grudge3ရုပ်ရှင်ကားတွင် ဦး ဆောင်ခဲ့ပြီး Hurt၊ Easy A၊ Paranormal Activity3နှင့် The Levenger Tapes တို့တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Freddie သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်နွေရာသီတွင်သူ၏ Unreal ၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သော Johanna Braddy နှင့်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မေလတွင်စေ့စပ်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင်ဂျော်ဂျီယာ၊ အတ္တလန်တာတွင်လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ သက်ပြင်းချ
Instagram မှတစ်ဆင့် @katkindrysdale
အစီရင်ခံစာများအရ Kathryn Drysdale မှလူတိုင်းအကြိုက်ဆုံး sassy dressmaker Madame Delacroix သည်လက်ရှိဘဝတွင်တစ်ကိုယ်ရေဘဝရှိသည်။
Lady Featherington ကိုဗြိတိန်တီဗီအိုင်ကွန် Polly Walker မှတီးသည်။ တကယ့်ဘဝ၌သူမသရုပ်ဆောင် Laurence Penry-Jones နှင့်လက်ထပ်ထားပြီးကလေးနှစ်ယောက်ရှိသည်။
တရားရုံး status: ကွာရှင်း
Lady Violet Bridgerton တွင်ပါဝင်သော Ruth Gemmell သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်လန်ဒန်၌သရုပ်ဆောင် Ray Stevenson နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူတို့က ၁၉၉၅ မှာ TV ဒရာမာ Band of Gold ကိုရိုက်ကူးစဉ်ကတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့လင်မယားသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ကွာရှင်းခဲ့ကြသည်။
Bridgerton ကိုယခု Netflix တွင်ရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix ၏သတင်းများ၊ ပြန်လည်ပေါက်ကွဲမှုများ၊ Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။
• ဤသည် Netflix အပေါ် Bridgerton ၏သွန်းအစစ်အမှန်ဘဝ၌ရှိကြ၏အဘယ်မျှလောက်ဟောင်းသည်
• သင်သိရန်သေနေသောကြောင့်ဤတွင် Bridgerton စာအုပ်တစ်ခုစီတွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာဖြစ်သည်
• ဤသည် Netflix အပေါ် Bridgerton ၏သွန်းအစစ်အမှန်ဘဝ၌ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏